EU waxay soo bandhigtay Shahaadada Dijital ah ee Cagaaran ee loogu talagay dadka safarka ah ee laga tallaalay COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » EU waxay soo bandhigtay Shahaadada Dijital ah ee Cagaaran ee loogu talagay dadka safarka ah ee laga tallaalay COVID-19
Belgium War Deg Deg Ah • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Xuquuqda Aadanaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Komishanka Yurub wuxuu ku nuuxnuuxsaday in shahaadooyinku ay yihiin ku meel gaadh lana tirtiri doono marka uu dhammaado Cudurka faafa ee COVID-19
Shahaadada Dijital ah ee EU-da ayaa loo soo jeediyay tallaalka COVID-19
Shahaadada Dijital ah ee Dijital ah ayaa la filayaa in lagu soo bandhigo Midowga Yurub dhexdeeda bartamaha bisha Juun
Tallaalka COVID-19 qasab kuma noqon doono safarka waddamada EU-da
Mas'uuliyiinta Midowga Yurub waxay soo bandhigeen fikradda Digital Green Certificate oo loogu talagalay inay u adeegto caddaynta tallaalka COVID-19. Shahaadada Dijital ah ee Dijital ah ayaa la filayaa in lagu soo bandhigo Midowga Yurub dhexdeeda bartamaha bisha Juun.
The Guddiga Yurub waxay ku soo saartay bayaankan soo socda magaalada Brussels:
“Maanta, Guddigu wuxuu ansaxiyay soo jeedin sharci-dejin ah oo lagu aasaasayo qaab guud oo loogu talagalay Shahaadada Dijital ah ee Dijital ah ee daboolaya tallaalka, baaritaanka iyo soo kabashada. Tani waa habka heer EU ee bixinta, xaqiijinta iyo aqbalida shahaadooyinka si loo fududeeyo dhaqdhaqaaqa xorta ah ee Midowga Yurub, iyadoo lagu saleynayo ixtiraam adag ee takoor la'aanta iyo xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta Midowga Yurub. Qaab dhismeed farsamo ayaa lagu qeexi doonaa heerka EU, oo la dejin doono bartamaha bisha Juun, si loo hubiyo amniga, isdhexgalka, iyo sidoo kale u hoggaansamida buuxda ee ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed. Waxay sidoo kale u oggolaan doontaa suurtagalnimada in la gaarsiiyo shahaadooyin la jaan qaadi kara oo laga bixiyo waddamada saddexaad. ”
Wakiilka Caddaaladda, Didier Reynders ayaa carabka ku adkeeyay in shahaadooyinku ay yihiin kuwa ku meel gaar ah lana tirtiri doono marka uu dhammaado Cudurka faafa ee COVID-19.
Sida laga soo xigtay Komishanka Yurub, toogashada COVID-19 qasab kuma noqonayso safarka waddamada EU-da.
Soo bandhigida shahaadada talaalka waa talaabada ugu horeysa ee dhab ahaan loo abuuro dukumiintiga. “Baarlamaanka Yurub iyo Golaha waa inay si dhakhso leh ula socdaan wadahadalada, heshiisna ka gaaraan soo jeedinta Shahaadada Dijital ah ee Dijital ah, oo ay ku heshiiyaan habka loo wajahayo furitaanka nabdoon ee ku saleysan qaab cilmiyeed adag. Komishanka Yurub wuxuu sii wadi doonaa taageerida sii kordheysa ee soo saarista talaalada, wuxuuna raadin doonaa xalal farsamo si loo kordhiyo isdhexgalka nidaamyada qaran si loo isdhaafsado xogta. Dowladaha xubinta ka ah waa inay dardargeliyaan barnaamijyada tallaalka, hubiyaan in xaddidaadaha ku-meel-gaarka ah ay yihiin kuwo saami ah oo aan takoor lahayn, loo qoondeeyo meelaha lagala xiriirayo inay iska kaashadaan ilaalinta biyaha qashinka ah oo ay ka warbixiyaan dadaallada la sameeyay, ayna billaabaan hirgelinta farsamo ee Shahaadooyinka Dijital ah ee Dijital ah iyada oo loo eegayo korsashada sida dhaqsaha ah loola socdo. soo jeedinta, ”ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
"Bisha Juun 2021, markay codsadaan Golaha Yurub, Komishanka Yurub waxay daabici doonaan warqad ku saabsan casharadii laga bartay aafada iyo wadada loo maro mustaqbal adkeysi badan," ayay guddiga soo gabagabeeyeen.